ခွေး – အဆိုပါ Tailoress
December 20, 2017 | အထူးပြောစရာမရှိ | ခွေး, ထိပ်, tutorials
December 19, 2017 | အထူးပြောစရာမရှိ | ခွေး, ထိပ်, tutorials
December 31, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | ခွေး, Pyjamas, tutorials
December 28, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | ခွေး, ဂျာကင်အင်္ကျီ, tutorials
လှမ်း 1 လူအပေါင်းတို့သည်ပုံစံကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်. Lay the two COLLAR pieces RIGHT SIDES TOGETHER. Pin and stitch the seam allowance leaving the neckline seam open. CLIP and TRIM the seam allowance. Turn RIGHT SIDES OUT and press. Top stitch all around close to the edge. လှမ်း2Fold the PLEAT sections towards the […]
Fido Jumper ကိုသင်ခန်းစာ
December 10, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | ခွေး, Jumper, tutorials
လှမ်း 1 လူအပေါင်းတို့သည်ပုံစံကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်. သင် hood ကိုအသုံးမစီစဉ်လျှင်ဤအဆင့်ကိုကျော်သွား: အတူတကွ hood ကိုအပိုင်းပိုင်းညာဘက်ခြမ်းကို တင်.. pin နှင့်နောက်ကျောအလယ်ဗဟိုပတ်ပတ်လည်ချုပ်ရိုးထောက်ပံ့ကြေးတွေချုပ်. တစ်ဦးကဘောဂျာစီစက်အပ်သုံးစွဲဖို့သေချာ. လှမ်း2ပနျးပှားကိုမြှ CUFF ကိုယူ, fold it in half lengthways and […]
December 3, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | ခွေး, ထိပ်, tutorials
December 1, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | ခွေး, ဂျာကင်အင်္ကျီ, tutorials
အောက်တိုဘာလ 31, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | ခွေး, Jumper, tutorials
လှမ်း 1 လူအပေါင်းတို့သည်ပုံစံကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်. သင် hood ကိုအသုံးမစီစဉ်လျှင်ဤအဆင့်ကိုကျော်သွား: အတူတကွ hood ကိုအပိုင်းပိုင်းညာဘက်ခြမ်းကို တင်.. pin နှင့်နောက်ကျောအလယ်ဗဟိုပတ်ပတ်လည်ချုပ်ရိုးထောက်ပံ့ကြေးတွေချုပ်. ဤစီမံကိန်းတစ်လျှောက်လုံး zig-zag ချုပ်သို့မဟုတ်အခြားလမ်းပိုင်းချုပ်သုံးပါ. ဒါ့အပြင်တစ်ဦးကဘောဂျာစီစက်အပ်သုံးစွဲဖို့သေချာ. လှမ်း […]